Shwe zin oo | Shwe Zin Oo Private Tour Guide in Bagan, Myanmar
Shwe zin oo. Shwe Zin Oo's Blog: 2011
ကို သမီးရီးစား ဖြစ် လာရတဲ့ ဘဝ ကနေ မင်္ဂလာဘယ်လို ဆောင်တယ် ဆိုတဲ့ အထိ ရှက်ကြော ဖြတ်ပြီး. လို့ ပြောကြားရင်း နတ်ဆိုးလေး နဲ့ မင်းဧရာ တို့ ရဲ့ တဂ့် ပိုစ့်လေး ကို အဆုံး သတ်လိုက်ပါပြီ. သေသူရော ရိုက်သူရော ဘဝ တွေ အများကြီး ဆုံးရှုံး သွားပြီလေ. စာဖတ်သူ တွေ များတာဟာ ကောင်းတဲ့ အလားအလာ တွေ လို့ဘဲ ယူဆပါတယ်. ၊ ကျနော်က ဆရာ တို့ စာရေးရင် ဘာနဲ့ ရေးပါသလည်းလို့ စာရွက်နဲ့လား ကွန်ပျူတာ နဲ့ လားလို့ မေးတာပါ. အင်း ငါးဥတွေ များ ပေါလွန်းလို့ အသား ဝယ်တာ ကို ဥ တွေပါ မကျေမနပ် နဲ့ ယူခဲ့ရတယ်. ရိပ်သာ ဝင်နိုင်အောင် encouragement ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ညီမ နဲ့ ချစ်ချစ်ကြီး ကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်.
။ အင်တာနက် မှာ မြန်မာ e-book တွေ လိုက် ရှာကြည့် ပါတယ်. မုံ့လေး ကို တလုပ် တဆုပ် စား ရေသောက်ပြီး. တလုံးသောက် နှစ်လုံးသောက် ဆိုလို့ သန်ရာ သန်ရာ အလုံးတွေ နဲ့ မှားအုန်းမယ်နော်. ။ ကျနော် က ဝယ်နေကျ ဆိုတော့ ကိုယ် ဝယ်မဲ့ ဈေးသယ် က ဘယ်အိမ် ထဲ ဝင်ရောင်းလည်း ဆိုတာ သိပါတယ်. I'm very excited to show you around our amazing Bagan city. ရွှေစင်ဦး ငယ်ဘဝ က မျှော်လင့်မိတာလေး တခု ကျနော့်ငယ်ဘဝ ဆိုလို့ ချစ်ချစ်ကြီး နဲ့ အကြောင်းတွေ ဘဲလို့ ထင်မသွားကြပါနဲ့အုန်း. မလုပ်ချင် မကိုင်ချင် လောက်အောင် စိတ်ရောကိုယ်ရော ပင်ပန်း လာပါတယ်.
Hot Sexy Model Girls: Sexy Model
ဒါပေမဲ့ ဘလောဂ့်ဂါ ရဲ့ အထက်မှာ တော့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိပါဘူး. ချစ်ညီမ စည်းစိမ်ရှင် က မိုးထိအောင်စည် က ဆရာလေး နှစ်ပါး ကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးပါတယ်. ဘလောဂ် လေး ရှိတဲ့ အတွက် ကျနော် ရေးချင်ရာ ကို ရေးလို့ရတယ်. The interior of the hotel does not look nice as well. ဘလောဂ့်ဂါ အပျိုကြီး အပျိုလေး တို့ ဟာ ဧည့်ခန်းလေး နဲ့ တူတဲ့ c-box လေးတွေ ကို ဖြုတ်ထားကြ ပါတယ်.
Shwe Zin Oo Private Tour Guide in Bagan, Myanmar
ဟို ဘက်က ကလေး ကတော်တော် တောင်းပန် ပါတယ်. ၊ဒါဟာ ကျနော့် ရှိသမျှ အရည်အချင်း အကုန်ပါဘဲ. ၊ ပိုင်ရှင် မကိ က ထိုင်ဝမ် ကနေ ယာနဒါန အတွက် ငွေလှူပါတယ်. သံဃာ တွေ အတွက် လိုအပ်ချက် ကို ဖြည့်စီး ပေးတဲ့ မိုးထိအောင်စည် ဆရာတော် ဘုရားကြီး ကို ချီးကျူး တော်မူ ပါတယ်. လူတွေရှေ့မှာ လူသတ်ခံရတယ်လို့ ငါ့မှာလည်း တာဝန် ရှိတယ်လို့. စာဖတ်ချင် တဲ့ စိတ်အာသာ ကို မပြည့်ဝ တဲ့ စာမျိုးတွေ နဲ့ တွေ့ တာ များလာရင် ကျနော် စာငတ် လာ ပါတယ်. ။ ရေဘယ်လောက် ဘဲ များများ စီးနေတဲ့ ရေမျိုး ဆို ပြသာနာ မရှိပေမဲ့ အခုဟာက ရေသေဖြစ်နေပါတယ်.
The breakfast buffet was plentiful with many choices both asian and western and cook to order eggs. အခုဘဝ မှာလည်း ရှမ်းအသင်းတွေ ဘာတွေ ဝင်ထားတယ် ပြောပါတယ်. နှစ်စဉ် ချစ်ညီမ က ရိပ်သာ ဝင်ဘို့ ခေါ်ပေမဲ့လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ရှောင်ခဲ့တာလည်း များ လှပါပြီ. ဒါမျိုးကြတော့ လည်း ရွှေစင်ဦး က အားနာပြန်ရော လာဘဲယူတော့ မယ်ဆိုပြီး သွားယူလိုက်ပါတယ်. လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက် က မန္တလေး မှာ မိုးတော်တော် ရွာလိုက်တဲ့ အတွက် တမြို့လုံး ရေလွှမ်း သွားပေမဲ့ နဲနဲ မြင့် တဲ့ အပိုင်း တွေကတော့ တရက်နဲ့ ရေကျသွားပါတယ်. ဒါအပြင် ကိုယ့် ကို ပိုက်ဆံလာပေး တဲ့ customer များ ကိုတောင် နှုတ်ဆက်ဖို့ မေ့မေ့ သွားလို့.
SHWE THA ZIN HOTEL $25 ($̶3̶1̶)
၊ ဆရာ က စာရွက်နဲ့ ဘဲ ရေးတာပါတဲ့. မီးမလာ တဲ့ နေ့ တွေ မှာ လည်း မီးသွေး ဖိုလေး နဲ့ ဆွမ်းအိုး ပြောင်းပြီး အမှီ ချက်ခဲ့ပါတယ်. ကိုရင် များ ကို သာသနာ အတွက် အားရှိစရာ. ဘလော့ဂ်ဂါ ၆ယောက် ပေါ့ ၂ယောက် မလာနိုင်ဘူး. ၊ နှစ်ယောက်စလုံး က ကျနော်ထက် အသက်အားဖြင့်တော့ ငယ်ပါတယ်.
သပိတ်ထဲ ပါတဲ့ အလွယ်စားလို့ ရမဲ့ အကြော်လေး. တို့ နဲ့ အတူ ကောမန့် မရေးပေမဲ့ မေးလ် မှ တဆင့် ဂျီတော့ခ် မှ တဆင့် အားပေးခဲ့ ကြတဲ့. စသည် စသည် ဘလော့ဂ် တွေ မှာ စာဖတ်ရင်း နဲ့ တခြား ဘလော့ဂ် တွေ လည်း အများကြီး ရှိကြောင်း သိလာပါတယ်. ။ အားလုံး ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျွေးလိုက်ရလို့ စိတ်ချမ်းသာ နေတုန်း ရှိသေး. ဆိုင်ပြင်မရောက်တော့ ဘယ်လောက်ထိ ဒုက္ခရောက်နေကြတယ် ဆိုတာ မသိပေမဲ့ ရပ်ကွက် ထဲ ထမင်းထုတ် ဆင့် တဲ့ အခြေအနေ ဆိုတော့ တော်တော်ဆိုးနေကြပြီဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်. ။ ကျနော် ကတော့ အပေါ်ထပ် က အထူးတန်း ကကြည့်နေတဲ့ သဘော ပေါ့.
။ အဲဒီလို ကြည့်နေရင်း တန်းလန်း ဘဲဗျာ ဟိုဘက် ဒီဘက် ပြေးလာပြီး ရိုက်လိုက်ကြ နှက်လိုက်ကြ နဲ့ လမ်းပေါ်မှာ သုံး ယောက် လဲသွားတယ်. တချို့ သဘောကောင်းတဲ့ သူကြီးမင်းများ အလကား ပေး တဲ့ မြေနေရာ လေး ကို ငှားလိုက်ပါတယ်. ဘုန်းဘုန်း ဘုရား လည်း ယာနဒါန ကားကြီး တွေ ကြည့်ပြီး ပိတိဖြာ နေပါတယ်. သူတို့ သုံးယောက် ထဲက နှစ်ယောက် တော့ မဟုတ်တန် ကောင်း ပါဘူးလို့. So, I have gotalot of experience for the tourism. ယာနဒါန ကားများ ကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေး တဲ့.